A A I-India Medical Visa
I-India Medical Visa (i-eVisa ye-India Yezinhloso Zezokwelapha)
Yonke imininingwane, izimo nezidingo odinga ukuzazi nge-Indian Medical Visa ziyatholakala lapha. Sicela ufake isicelo sale Visa Yezokwelapha yaseNdiya uma ufika ezokwelashwa.
Njengesiguli esifuna ukwelashwa kwelinye izwe, umcabango wokugcina engqondweni yakho kufanele kube izihibe okufanele udlule kuzo ukuze uthole iVisa yakho yokuvakasha. Ikakhulu esimweni esiphuthumayo lapho kuphuthuma khona ukunakekelwa kwezokwelapha kuyadingeka ukuthi kube yisithiyo impela ukuvakashela i-Embassy yalelo zwe ukuthola iVisa ongavakashela kuyo lelo zwe ukuthola ukwelashwa. Kungakho kusiza kakhulu ukuthi uHulumeni wase-India enze ukuthi kutholakale i-elektroniki noma i-e-Visa ebhekiswe ngqo kubavakashi bamazwe aphesheya ezweni abafike ngenxa yezinhloso zokwelashwa. Ungakwazi faka isicelo seVisa Yezokwelapha yaseNdiya online esikhundleni sokuthi uye kwiNxusa Lasekhaya laseNdiya ezweni lakho ukuze ukulungele ukuvakashela eNdiya.
Isicelo se I-India Medical Visa kumele yenziwe online.
Izimo Zokufaneleka ze-India Medical Visa kanye Nesikhathi Sokusebenza Kwayo:
Sekulula impela ukuthola online i-Visa yezokwelapha yaseNdiya kepha ukuze ukwazi ukuyifanelekela udinga ukuhlangabezana nezimo ezimbalwa zokufaneleka. Uma nje ufaka isicelo seVisa Yezokwelapha yaseNdiya njengesiguli ngokwakho uzokwazi ukuyifanelekela ngokuphelele. I-Indian Medical Visa iyi-Visa yesikhashana futhi isebenza izinsuku ezingama-60 kuphela kusukela ngosuku lokungena yesivakashi ezweni, ngakho-ke uzokwazi ukusithola kuphela uma uhlose ukuhlala izinsuku ezingeqile kwezingama-60 ngasikhathi sinye. Kubuye kube yi- I-Visa yokungena kathathu, okusho ukuthi ophethe i-Indian Medical Visa angangena ezweni kathathu kungakapheli isikhathi sokuba semthethweni kwayo, okusho, njengoba kushiwo ngenhla, izinsuku ezingama-60. Kungaba yiVisa yesikhashana kepha iMedical Visa yaseNdiya ingatholakala kathathu ngonyaka ngakho-ke uma udinga ukubuyela ezweni ukuze uthole ukwelashwa kwakho ngemuva kwezinsuku zokuqala ezingama-60 zokuhlala kwakho ezweni ungasifaka isicelo Izikhathi ezimbili ngaphezulu kungakapheli unyaka. Ngaphandle kwalezi zidingo zokufanelekela i-Medical Visa ye-India, futhi udinga ukuhlangabezana nezimo zokufaneleka ze-e-Visa ngokujwayelekile, futhi uma wenza kanjalo uzokwazi ukufaka isicelo sayo.
Izizathu lapho ungafaka khona isicelo se-India Medical Visa:
I-Indian Medical Visa ingatholakala kuphela ngezizathu zokwelashwa futhi yilabo bahambi bamazwe aphesheya kuphela abavakashela izwe njengoba iziguli ezifuna ukwelashwa lapha ezingafaka isicelo sale Visa. Amalungu omndeni wesiguli afisa ukuhamba nesiguli ngeke afaneleke ukungena ezweni nge-e-Visa yezokwelapha. Kuzofanele bafake isicelo esikhundleni salokho okubizwa ngokuthi yi-Medical Attendant Visa for India. Nganoma yiziphi izinhloso ngaphandle kokwelashwa, njengokuvakasha noma ibhizinisi, kuzodingeka ufune i-e-Visa ethize kulezo zinhloso.
Izidingo ze-India Medical Visa:
Izidingo eziningi zesicelo se-Indian Medical Visa ziyefana nezamanye ama-visa. Lokhu kufaka phakathi ikhophi elenziwe ngekhompyutha noma eliskeniwe lekhasi lokuqala (elichaza umlando womuntu) lepasipoti yezivakashi, okumele kube yi Iphasiphothi ejwayelekile, hhayi iDiplomatic noma olunye uhlobo lwePasipoti, futhi okufanele ihlale isebenza okungenani izinyanga eziyisithupha kusukela osukwini lokungena eNdiya, ngaphandle kwalokho kuzodingeka uvuselele ipasipoti yakho. Ezinye izidingo ikhophi lesithombe sesitayela samuva sepasipoti esinezivakashi, ikheli le-imeyili elisebenzayo, kanye nekhadi lasebhange noma ikhadi lesikweletu lokukhokha imali yesicelo. Ezinye izidingo eziqondene ne-Indian Medical Visa yikhophi yencwadi evela esibhedlela saseNdiya isivakashi ebesizofuna ukwelashwa kuso (lencwadi kuzodingeka ibhalwe ku-Official Letterhead yeSibhedlela) futhi isivakashi kuzodingeka nokuthi siphendule noma yimiphi imibuzo ngesibhedlela saseNdiya abazobe bevakashele kuso. Uzocelwa futhi ukuthi ube ne ithikithi lokubuya noma lokuya phambili ngaphandle kwezwe.
Kufanele ufake isicelo seVisa Yezokwelapha yaseNdiya okungenani Izinsuku ezingu-4-7 kusengaphambili ngendiza yakho noma usuku lokungena kwakho ezweni. Ngenkathi iMedical e-Visa yaseNdiya ingakudingi ukuthi uvakashele iNxusa LaseNdiya, kufanele uqiniseke ukuthi ipasipoti yakho inamakhasi amabili angenalutho ukuze uMphathi Wezokufuduka ayigxivize esikhumulweni sezindiza. Njengamanye ama-e-visa, ophethe i-Indian Medical Visa kufanele angene ezweni evela ku- kuvunyelwe ukuthunyelwa kwamanye amazwe kokuhlola okubandakanya izikhumulo zezindiza ezingama-28 namachweba ama-5 futhi ophetheyo kufanele aphume nakokugunyaziwe kwe-Immigration Check Posts.
Lona lonke ulwazi ngezimo zokufaneleka nezinye izidingo ze-Indian Medical Visa okudingeka wazi ngaphambi kokufaka isicelo sayo. Ukwazi konke lokhu, ungafaka isicelo kalula seVisa Yezokwelapha yaseNdiya kabani Ifomu lesicelo se-India Visa ilula futhi iqondile futhi uma uhlangabezana nazo zonke izimo zokufaneleka futhi unakho konke okudingekayo ukukufaka lapho-ke ngeke uthole ubunzima bokufaka isicelo nokuthola i-India Medical Visa. Uma, noma kunjalo, udinga noma yikuphi ukucaciswa okufanele ukwenze I-India Visa Ideski Losizo ukwesekwa nokuholwa.
Uma ukuvakasha kwakho kungenxa yokubona kanye nezinjongo zokuvakasha, lapho-ke kufanele ufake isicelo se- I-Visa yabavakashi baseNdiya. Uma uza ohambweni lwebhizinisi noma ngenhloso yokuhweba kufanele ufake isicelo se- I-Visa Yebhizinisi laseNdiya.
© copyright ngu- www.india-visa-online.org